Ongorora kurara kwako kubva kuApple Watch neAotSleep | IPhone nhau
Vazhinji venyu muchave ne Apple Watch, Apple inogona kupfeka, chishandiso chakatanga kuodza moyo vazhinji nekuda kwekukanganisa kwayainayo padanho re software, ehe, vakomana veCupertino vakazviziva izvi uye zvishoma nezvishoma ivo vari kuvandudza iyo firmware yeApple Watch kuti iipe izvo zvitsva maficha, chimwe chinhu chatakaona munguva pfupi yadarika neiyo nyowani sinema modhi iyo inotevera watchOS 3.2 ichawedzera.
Asi pane chimwe chinhu Apple chisati chawedzera uye icho chinodikanwa nevakawanda, chimwe chinhu icho isu tese chatinoda kuti timbozviona kare mune zvimwe zvinopfeka zvakaita semaoko kana mawachi. kuongorora (kana kuteedzera) kwekurota kwedu... Ehe, pane zvakawanda zvekushandisa izvo neimwe nzira kana imwe zvinokwanisa kuita ongororo iyi kuburikidza neApple Watch yedu. Nhasi tinokuunzira imwe yeinonyanya kufadza, pane zvakawanda zvingasarudzwa asi zvakasiyana neiyi, hapana inozviita zvoga, tinokupa iwe Kurara Auto, chirongwa chinozoongorora kurara neako Apple Watch uye / kana yako iPhone zvakazara otomatiki ...
Chakanyanya kunaka ndechekuti, chii AutoSleep haidi kupindira kwedu, iyo Anwendung inoshandisa yedu Apple Kutarisa kurara kwedu uye kutipa mushumo nezvehunhu hwayo, ichatiudza kuti takamuka nguvai, uye kurova kwemoyo kwatakave nako patakarara. Kana iwe usiri kuda kupfeka yako Apple Tarisa husiku hwese, unogona kuisiya ichichaja iwe wakarara woipfeka kana wamuka kuitira kuti iyo app iite otomatiki kuti wave nenguva yakareba sei wakarara, chimwe chinhu chicha teedzerawo nekutenda kune yako iPhone.
Sezvo ini ndambokuudza, ndanga ndichiiyedza kwemazuva mashoma uye chokwadi ndechekuti inoshanda chaizvo, ine mutengo we 2,99 € izvo zvinogona kukukanda kumashure, asi chokwadi ndechekuti si Iwe urikutsvaga chishandiso chekutevera uye kuongorora chako, ichi chinozviita chaizvo Uye chinhu chakanakisa ndechekuti hazvingareve mutengo wakawedzerwa webhatiri, chimwe chinhu icho pakupedzisira chatinofanira kufunga nezvacho. Zvakare, nezuro vakagadzirisa AutoSleep kune iyo vhezheni 3.0 ichiwedzera kuvandudzwa kwakawanda mukugadzirwa kwechishandiso, uye mitauro mitsva pakati pechiSpanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ongorora kurara kwako kubva kuApple Watch neAotSleep
Substrate Safe Mode yakagadziridzwa kuunza kuvandudzwa kweYalu